“Hurdadu way igu adag tahay wixii ka dambeeyay kulankii….” – Macallinka Kooxda Barcelona ee Xavi Hernandez – Gool FM
“Hurdadu way igu adag tahay wixii ka dambeeyay kulankii….” – Macallinka Kooxda Barcelona ee Xavi Hernandez
Haaruun December 22, 2021
(Madrid) 22 Dis 2021. Tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona ee waddanka Spain, Xavi Hernandez ayaa sheegay in uu aad uga xun yahay natiijadii barbardhaca ahayd ee 1-1 ay kooxdiisu xalay la gashay Naadiga Sevilla, kulankaas oo ahaa midkii 4-aad ee Horyaalka La Liga ee horey u baaqday.
Ciyaartan ayaa ka dhacday hoyga Andalusiyiinta ee Ramon Sanchez, waxaana goolka Sevilla u dhaliyay daqiiqaddii 32’aad ciyaaryahan Pablo Gomez, halka goolka Barcelona uu Madax ku dhaliyay Ronald Araujo.
“Dareen isku qasan ayaan dareemayaa, macaan iyo qaraar, wayna igu adag tahay in aan hurdo, maadaama ay ahayd inaan kulankaasi guuleysanno.” ayuu Xavi u sheegay Wargeyska Marca ee ka soo baxa Spain.
“Waa inaan is-dejinnaa, ciyaartii Sevilla qaybtii hore aad baan u wanaagsanayn, naadigeennu xoogaa horumar ayuu sameynayaa wax wanaagsan ayaana qabanaynaa”.
“Maanta aad baan ugu baahneyn guul si aan u istaagno booska loogu soo gudbayo Koobka Horyaallada Yurub, waana ku faanaynaa naadigan inkastoo aan barbardhac galnay, nasiibku nooma hiillin, waayo kubaddii Dembele ayaa ku dhacday birta, waxaana la dheelnay koox weyn.” ayuu hadalkiisa ku daray Xavi.
Real Madrid oo weynaysa 11 ciyaaryahan kulankeeda caawa ee Athletic Bilbao, xilli ay sare u kaceen kiiskaska Korona
Halyeey kooxda Manchester United ah oo kula taliyay Cavani inuu u dhaqaaqo Barcelona